Ambassoder Baashe Cawil Oo Sheegay Cabsiye Inuu Yahay Aasaasayaashii Xisbiga Kulmiye kuna Bogaadiyay Magacaabista.. | Marsa News
Ambassoder Baashe Cawil Oo Sheegay Cabsiye Inuu Yahay Aasaasayaashii Xisbiga Kulmiye kuna Bogaadiyay Magacaabista..
March 10, 2020 - Written by editor marsan
Hargeisa:(Marsanews) Safiirka somaliland u fadhiya wadanka kenya Danjire, Baashe Cawli Xaaji Cumar, ayaa ka hadlay magacaabista gudida qabanqaabada shirwaynaha xisbiga kulmiye, islamarkaana bogaadiyay gudidaas.
Safiir Baashe oo qoraal uu soo saaray nuqul ka mida na soo gaadhsiiyay ayaa qoraalkiisa kaga hadlay Maxamed Cabdilaahi Cabsiiye oo ka mida gudida loo magacaabay qabanqaabada shirwaynaha xisbiga kulmiye, isagoo safiir baashe sheegay in Cabsiye uu ka mid yahay shaqsiyaadka ugu mudan in loo magacaabo gudidan iyo xilal kale ba, safiir baashe waxa uu intaa ku daray in aanu ahayn cabsiye nin xigto iyo wax la mida ku yimid ee uu yahay tiirarkii adkaa ee kulmiye taniyo bilawgii xisbigaba.
Waxaanu safiirku ku bilaabay qoraalkiisa sidan
Mohamed Cabdilaahi Cabsiiye waxa uu ka mid ahaa aasaasayaashii Xisbiga Kulmiye markii lagaga dhawaaqay laantiisa Kulmiye ee London sanadkii 2002 dii. Waana shakhsi kala soo dabaashay Xisbiga waayo iyo marxalado badan oo soo wajahay mudaadaas uu jiray.
Ma aha nin ku helay Xilkaa maanta loogu magacaabay ee guddiga qabanqaaabada Shirweynaha Xisbiga Kulmiye, ehelnimo iyo xigto. Wuxuuna u qalmaa in xilkaa iyo mid ka sareeyaba in loo magacaabo. Waanan ku hambalyeenayaaa isaga iyo masuuliyiinta kale ee maanta Madaxweynahu magacaabay